उचाइमा पुर्‍याएको यही गीतले मलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो
कालीप्रसाद रिजाल–वरिष्ठ गीतकार
२०७५ कार्तिक २९ बिहीबार ११:३०:००
बनारसबाट अर्थशास्त्रमा एमए सक्याएर विराटनगर फर्किएका कवि तथा गीतकार कालीप्रसाद रिजाल (७८), काठमाडौं गएर कानुनमा स्नातक गर्ने विचारमा थिए । तर काठमाडौं पठाउने सोचमा उनका पिताजी थिएनन् ।
त्यसैबेला विराटनगर गोश्वारा कार्यालयमा उनले एउटा सूचना देखे । काठमाडौंमा राष्ट्रव्यापी साहित्य सम्मेलन हुँदैरहेछ । त्यसका लागि साहित्यकार चाहिने रहेछ । उनी आफ्नो पहिलो कविता संग्रह ‘ज्वारभाटा’ लिएर अञ्चलाधीशको कार्यालय पुगे । त्यसबेला काशिराज उपाध्याय अञ्चलाधीश थिए । उनले आफ्नो कृति दिँदै भेट गर्न आएको बताए ।
अञ्चलाधीशले पनि उनका केही कविता पढेर राम्रो लेख्नु हुँदोरहेछ भने । अनि उनैले काठमाडौंमा साहित्य सम्मेलन भइरहेको जनाउ दिँदै काठमाडौं जान भने । उनी यही नै चाहन्थे । केही दिन भित्रै उनी काठमाडौं उत्रिए, २०२० सालमा ।
मंगलबार कवि तथा गीतकार कालीप्रसाद रिजालसंग उनको चावहिल महाँकालस्थित निवासमा कुरा गर्दा उनी भन्दै थिए, ‘म कडा कविता वा विद्रोही चेतको कविता धेरै लेख्थेँ । कडाकडा व्यँग्य कविता पनि लेख्थेँ । मैले त्यसबेला राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलनको व्यवस्थापन फितलो देखेपछि व्यापक विरोध गरेँ । यसले मलाई सिनेमाको हिरो जस्तै बनायो ।’
उनले सम्मेलन व्यवस्थापनको विरोध मात्रै गरेनन्, कडा कार्यपत्र पनि लेखे । कार्यपत्रमा उनले लेखकहरुले नुनको सोझो गर्नुपर्ने ? अञ्चलाधीशले साहित्यकार छानेर पठाउनु पर्ने ? विषयलाई लिएर कडा आलोचना गरेका थिए । यसले उनलाई चर्चामा ल्यायो ।
सम्मेलन समापनको दिन साँझ नाचघरमा सम्पन्न कविता गोष्ठीमा ‘ज्वारभाटा’ बाटै उनले एउटा कविता सुनाए । कविता एउटी बाल विधवाको विषय माथी लेखिएको थियो । उनको कवितामा राजा महेन्द्र र रानी रत्नले पनि खुबै ताली पिटे । उनलाई त्यसबेलाका मन्त्रीहरुले बधाई पनि दिए ।
उनी आफ्नो काकाको डेरामा बस्न गएका थिए । भोलीपल्ट उनलाई साहित्य सम्मेलनको कार्यालय जाउँजाउँ लाग्यो । उनी लागे नयाँसडक तिर । ऋषिकेश शाह अध्यक्ष र कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान सदस्य सचिव थिए, सो साहित्य सम्मेलनको ।
उनलाई सम्मेलनको कार्यालयमा देख्नासाथ ‘कहाँ हराएको’ भनेर प्रश्न गरियो । अनि भनियो, ‘तपाईको कविता पुरस्कृत भएको छ । दरबारलाई कविताको कपि चाहियो ।’ उनले आफूसित भएको ज्वारभाटाको एक प्रति पुस्तक नै चिनो लगाएर दरबारमा पठाए ।
त्यो क्षण सम्झिए कालीप्रसादले । उनी भन्दैथिए, ‘त्यहाँँका आयोजकहरुले मलाई ‘तपार्इं त गालपारा मानिस पो हुनुहुँदो रहेछ’ भनेर गाली गरे । पछि सिंहदरबारमा आयोजित रात्रीभोजमा पनि पुगेँ । सामान्य पहिरनमा बिना टोपी पुगेको मलाई उनीहरुले ‘टोपी लगाएर आउनु पर्दैन ?’ भनेर गाली गर्दै तपाईं त साँच्चिकै गालपारा मानिस भन्दै थिए ।’
यो सम्मेलनमा रिजालले पनि एकेडेमी पदक पाए । यसैबेला उनले पहिलो पटक सिंहदरबार छिरेर हेर्ने मौका पाएका थिए । राजासंगको रात्री भोजमा सम्मिलित पनि भए । राजासंग तपाईँका तपाईँ लगाएर कुरा पनि गरे । उनलाई बक्स्योस भन्न नआएकोले उनले तपाईं नै सम्वोधन गरेका थिए ।
त्यसैबेला उनलाई सरकारी जागिरको प्रस्ताव आयो । प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीबाट यो प्रस्ताव आएको उनी बताउँदै थिए । तर जागिर प्रतिको उत्साह वा मोह नभएकोले उनले जागिर खान्न भनिदिए । उनले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई पनि वास्ता गरेनन् ।
उनका पुर्खा धनकुटाको सिबुवाबाट धरान झरेका हुन् । परिवारको वृद्धिसंगै जग्गा जमिन बाँडिदै गएपछि उनका पिताजी खेतीपाती गर्न धरान झरे । त्यसबेला जंगल फाँडेर आवाद गरेपछि त्यो जग्गा आवाद गर्नेको नाउँमा दर्ता हुन्थ्यो । यसरी जंगल फाँडेर, उनका हजुरबुबा र पिताजी खेतीपातीमा लागे । कारोबार स्थल बन्यो मोरंगको रंगेली ।
उनका माता पिता विराटनगरमा गएर बस्न थाले । विराटनगरमा स्कुल खुलीसकेको थियो । केटाकेटीको पढाई पनि प्राथमिकतामा थियो । त्यस पछि खेतमा भएका उब्जनीहरुको व्यापार पनि महत्वपूर्ण काम थियो । किनभने आम्दानीको मूल स्रोत नै यहि थियो । उनका हजुरबुबा हजुरआमा धरानमै थिए ।
पछि उनी पनि धरानै गएर पढ्न थाले । यसपछि भने उनी आफ्ना मातापितासंग बहुत कम बसे । हजुरबुबा हजुरआमासँग धेरै बसे । तथापि उनको बाल्यकाल कहिले विराटनगर त कहिले धरान गर्दै बित्यो । अन्ततः उनले २०१३ सालमा धरानको पब्लिक स्कूलबाट प्राइभेटरुपमा एसएलसी दिएर पास गरे ।
एसएलसी पास भएपछि उनले काठमाडौं जाने मनस्थिति बनाए । जबकी घरमा पिताजीका इच्छा उनले बनारस गएर साइन्स पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । उनी डाक्टर र इन्जिनियर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो होला, अभिभावकको । तथापि उनको चाहना त्यो भएन । उनले बनारस जाने मन गरेनन् । उनको गन्तव्य थियो, काठमाडौं । यसको एकमात्रै कारण थियो, उनमा रहेको साहित्यप्रतिको लगाव, जुन उनकी आमाले उनीमा भरिदिएकी थिइन् ।
कालीप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘ममा साहित्यिक चेत मेरी आमाले भरिदिनुभएको हो । तेह्रथुम पोक्लावाङकी उहाँ साक्षर हुुनुहुन्थ्यो । शिक्षा त के लिनु भएको थियो र, तर घरमै बसेर संस्कृतका श्लोकहरु पढ्न जान्नु भएको थियो । पढाईप्रतिको रुची उहाँमा अत्यधिक थियो । मेरा काकाहरुलाई घरमै शिक्षकले पढाउँदा उहाँ सुनिरहनु हुन्थ्यो । अरुलाई दिइएको शिक्षा मनन् गर्नुहुन्थ्यो । ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो ।’
उनका अनुसार कवि रिजालकी माताले नेपाली पद्य संग्रह, नेपाली गद्य संग्रह, विभिन्न कविहरुका कविताका पुस्तकहरु फेला परेसम्म पढ्नु हुन्थ्यो । उनी बेलाबेलामा धरानबाट विराटनगर पुग्दा उनकी आमाले तिनै साहित्यिक कृतिबाट विभिन्न श्लोकहरु सुनाउँथिन् ।
कालीप्रसादलाई उनले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नाट्य सम्राट बालकृष्ण समका कविताहरु सुनाएर उनको मनमा काव्य बिजको अंकुरण गरिदिएकी थिइन् । यसैको प्रतिफल थियो, एसएलसी पछिको काठमाडौं तिरको यात्रा ।
उनी भन्छन्, ‘यसकै प्रभावले म सानै उमेरमा गीत लेखेर गाउन थालेँ । मेरो प्रशंसा पनि हुन्थ्यो । चर्चा पनि हुन्थ्यो । बेलाबेलामा पुरस्कार पनि पाउँथेँ । आमाले कविताका श्लोकहरु सुनाउँदा बलिन्द्रधारा आँशु झर्थे, मेरा आँखाबाट ।’
उनले आमाले भट्याएको एउटा श्लोक सुनाए,
अब सुत्दा तिमीलाई म भित्ता तिर राख्दछु
बस्दा यो काखमा राखी हरिनाम सुनाउँछु
बेला वसन्तको पर्ख जिन्दगीको हठी बनी
आमाले सुनाएका श्लोकहरुले उनलाई भित्रसम्म छुन्थ्यो । सायद त्यसैले पनि उनी कविता सुनेर रुन्थे । त्यसैले उनको मनमा काठमाडौं पुगेर ती महान कवि तथा साहित्यकारहरुसित भेट्ने उत्कट इच्छा जाग्दै गयो ।
जब उनलाई बनारस जान भनियो, उनले घरमा हंगामा मच्चाए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो लागि काठमाडौं टाढा थियो । बनारस नजिक थियो । जोगबनीमा रेल चढेपछि सिधै बनारस पुगिन्थ्यो । काठमाडौं पुग्न गाह्रो थियो । त्यसैले त्यसबेला बनारस नै जान्थे पढ्नलाई । तर मलाई त काठमाडौं जानु थियो ।’
उनलाई काठमाडौं नपठाउन अनेक गरियो । जाडो छ भनियो, अप्ठेरो छ भनियो । तर उनी एकोहोरिएका थिए, काठमाडौं नै जानका लागि । यसै कारण उनले अडान लिए । उनको बनारस नजाने अड्डीले काम पनि ग¥यो ।
भरखरै उडान सुरुभएको डेकोटा विमान चढेर उनी २०१३ सालमा विराटनगरबाट काठमाडौं ओर्लिए ।
काठमाडौं ओर्लदा उनलाई लिन उनका काका एयरपोर्टमा पुगे । काकाको डेरा नक्सालमा थियो । उनी सरकारी सेवामा सुब्बा थिए ।
काठमाडौं आउनु पूर्व कालीप्रसाद रिजाललाई लाग्थ्यो, मुनामदन लेख्ने कवि कस्ता होलान् ? भक्त धु्रव लेख्ने सम कस्ता होलान् ? कवि शिरोमणी लेखनाथ कस्तो देखिँदा होलान् ? यस्ता कवि लेखक साहित्यकारहरुप्रति उनको अपार उत्सुकता थियो । काठमाडौं ओर्लिँदा उनी आल्हादित नै भए ।
काठमाडौं ओर्लिएको भोलिपल्टै अपरिचित काठमाडौंमा काकाको साइकल बोकेर उनी देवकोटा, सम र लेखनाथलाई भेट्न हिँडे । तर सबैको घर बसोबास टाढा भएकोले सोध्दै खोज्दै उनी ज्ञानेश्वर पुगे, बालकृष्ण समलाई भेट्न । बालकृष्ण समको घरको ढोकामा आफू विराटनगरदेखि भेट्न आएको बताएपछि भोलिपल्ट बिहान आउन भनियो । उनमा खुशीको सीमा रहेन ।
अब उनले आफू आएको बाटो बिर्सिए । काकाको डेरा नक्सालसम्म जाने बाटो पहिल्याउन गाह्रो भयो । उनी घरमा कसैलाई नभनेर हिँडेका थिए । तरपनि काका चारखालमा काम गर्छन् भन्ने थाहा भएकोले उनी सोध्दै चारखाल पुगे । काकासँग भेटे । यथार्थ बताए । काकाले एकजना सहयोगीको साथ लगाएर उनलाई डेरा पठाउने व्यवस्था गरिदिए ।
त्यसपछि सुरु भयो काठमाडौंमा साहित्यकारहरुसँग भेटघाटको शृंखला । त्यसपछि रिजालले लेखनाथ पौडेल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथितहरुसित भेट गरे । बालकृष्ण समसँग पछिसम्मै उनको राम्रो र नजिकको सम्वन्ध रहेको उनी बताउँदै थिए ।
एकदिन उनका दाइ चिरञ्जीवी रिजालले महाकवि देवकोटाको घरमा लिएर गए । उनीसंग परिचय गराए । विराटनगरदेखि भेट्न आएको बताए । र, महाकविलाई आफ्नो कविताहरु पनि सुनाए ।
रिजालले सम्झिए त्यो क्षण । भने, ‘त्यसबेलासम्म देवकोटा बिरामी भइसक्नु भएको थियो । झोल खानेकुरा मात्रै खानु हुन्थ्यो । खासै बोल्नु हुन्थेन । उहाँलाई मैले मेरा अभ्यास पुस्तिकामा लेखिएका सबै कविता सुनाएँ । उहाँले मेरो शीरमा हात राखेर आशीष दिनु भयो । महाकविको हातको त्यो स्पर्श मलाई आजपनि अनुभूत हुन्छ ।’
बामपन्थी विचारबाट प्रभावित, विद्रोही चेतनाका कवि तथा गीतकार रिजाल अंग्रेजी साहित्य पढ्न चाहन्थे । तर पारिवारिक इच्छा बढी हावी भएकोले साइन्स पढ्ने तयारी भयो । तर, टेष्ट लिँदा उनले साइन्स पढ्न नसक्ने कुरा प्रिन्सिपलले बताएपछि भरखरै थालिएको कमर्श कक्षामा उनी भर्ना भए । र, त्रिचन्द्रबाटै बीकम पास गरे ।
कमर्शको पढाई सुरु भइसकेको थियो । साथै उनको साहित्यप्रतिको रुची र उत्साहमा कुनै कमि आएको थिएन । उनी कविता गोष्ठीहरुमा सहभागी हुन्थे र आफ्नो कविता सुनाउँथे । एक पटक त्रिचन्द्र कलेजले अन्तर कलेज कविता प्रतियोगिता गर्ने भयो । उनले पनि सूचना पाए । उनले एउटा गद्य कविता लेखेर दिए । उनको यो पहिलो गद्य कविता थियो । यस अगाडि आफूले गीति कविता धेरै लेख्ने गरेको बताउँदै थिए ।
अन्तर कलेज प्रतियोगितामा सहभागी यो कविताको शीर्षक थियो ‘मायाको प्रदेश’ । कवितामा प्रथम पुरस्कार उनैले पाए । अनि राजा महेन्द्रको हातबाट प्रमाणपत्र र तक्मा पनि पाए । त्यसपछि उनको चर्चा चुलियो । त्यसबेलाका साहित्यिक पत्रिकाहरुले उनको कविता छाप्न थाले । यसरी उनलाई उनको कविताले शिखर चढाउँदै गयो ।
उनी भन्छन्, ‘पहिले पहिले गीत वा कविता लेख्दा सामान्यरुपमा नै गीति कविता वा गीत लेख्थेँ । तर काठमाडौंको कवि गोष्ठीले मलाई धेरै कुरा सिकायो । मैले पनि गम्भीर भावका कविताहरु लेख्न सुरु गरेँ ।’
उनी बीकम पास भएपछि इकोनोमिक्समा एमए गर्न भर्ना भए, त्रिविविमा । साथै कानुनको क्लासमा पनि भर्ना भए । काठमाडौंमा एक्लै बस्न थाले । तर उनको खानपान नमिलेर उनी नराम्ररी बिरामी परे । एक वर्ष उनको पढाई छुट्यो । उनी विराटनगर फर्किए । र त्यहाँबाट बनारस पुगे, उपचार र पढाई दुबै कामका लागि । बनारसमा उनको उपचार पनि भयो र त्यहीँ नै विडला होस्टलमा बसेर एमए पढ्न सुरु गरे ।
बनारसमै हुँदा उनको परिचय कवि तथा साहित्यकार बासु शशीसंग भयो । उनी शब्दकोषको कामका लागि बनारस पुगेका थिए । बासु शशीसंगको भेटपछि बनारसमा पनि उनको लेखनले गति लियो । बासु शशी कालीप्रसादलाई बोलाइरहन्थे । उनी पनि गइरहन्थे । लेखिरहन्थे । त्यसैबेला उनको पहिलो कविता संग्रह प्रकाशित भयो, ‘ज्वारभाटा’ ।
साहित्य सम्मेलनका लागि काठमाडौं पुगेका उनी केही काम गरेर कानुन पढ्ने विचार बनाउँदै थिए । तर विराटनगरबाट उनको पिताजीको आवा (आकाशवाणी) आयो, ‘तु आउनु’ भनेर । उनी विराटनगर फर्किए । त्यसैबेला उनलाई धनकुटाको डिग्री कलेजमा प्रिन्सिपल भइदिने प्रस्ताव आयो । उनले पिताजी मार्फत गरिएको आग्रहलाई नाई भन्न सकेनन् । र हिँडेरै पुगे धनकुटा । जहाँ उनले दुई वर्ष प्राध्यापन गरे । कलेजलाई व्यवस्थित तुल्याए । कलेजको आर्थिक अवस्थालाई उकासे । उनले पढाउनका लागि भारतबाट समेत केही प्रोफेसर ल्याएका थिए । हेमचन्द्र पोखरेल र उनी आफै पनि पढाउँथे ।
त्यसैबेला क्षेत्रीय भ्रमणमा राजा महेन्द्र धनकुटा पुगेका थिए । एकसाँझ कवि गोष्ठी गरियो, कवि राजाकासाथ । कालीप्रसादलाई पनि बोलाइयो । उनले पनि कविता वाचन गरे ।
तर, सरकारी जागिर खाने सोच नै नभएका कालीप्रसादका सामु सरकारी अधिकारी भइदिन फेरि पनि प्रस्ताव आयो । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नै भने, राजा उनलाई भूमि सुधार अधिकारी बनाउन चाहन्छन् ।
उनी भन्दै थिए, ‘अर्को दिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बोलाएर भने, –भूमिसुधार अधिकारीका रुपमा काम गरेर राजालाई सहयोग गर्नुप¥यो । यो राजाले नै दिएको निर्देशन हो ।– मैले सूर्यबहादुरलाई आफूलाई सरकारी सेवामा रुची नभएको बताएँ । थापाले, –त्यसो भए म राजालाई यही सुनाई दिउँ ?– भने ।’
त्यस पछि उनले आफ्ना पिताजीसंग सल्लाह गरे । पिताजीले पनि राजाको कुरा केही दिनलाई मानेरै हेर भनेपछि उनी परिवार सहित धनकुटाबाट फर्किए । यसरी उनी २०२२ सालमा भूमि सुधार अधिकारीमा नियुक्त भए ।
उनको नियुक्ति पाल्पा भएको थियो । त्यहाँ दुई वर्ष काम गरेर उनी काठमाडौं फर्किए । त्यस पछि उनी जिल्ला जान मानेनन् । छोराछोरीको भविष्यका लागिपनि उनले काठमाडौं नै बस्ने अठोट गरे । उनी भन्छन्, ‘तर म भूमिसुधारबाट बाहिर जान पाउँदिन थिएँ । म डाइरेक्टरसम्म भएँ । पछि मैले खुलाबाट लोकसेवाको जाँच दिएँ । उपसचिव भएँ । त्यस पछि मलाई सूचना विभागमा पदस्थापन गरियो ।’
सुरुमै काठमाडौं भित्रिए पछि उनले गीत लेख्न छोडिसकेका थिए । गद्य कवितामै उनी रमाएका थिए । तर, अचानक उनका अगाडि बीस वर्ष पछि गीत लेख्ने प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आएको थियो, बरिष्ठ र लोकप्रिय गायक नारायण गोपालका तर्फबाट ।
सूचना विभागको उनको कार्यकक्षमा एक दिन प्रसिद्ध गायक नारायण गोपाल आए । दुबैबीच परिचय आदानप्रदान भयो । रानीपोखरी वारिपारि कार्यालय (नारायण गोपाल नाचघरमा कार्यरत थिए र सूचना विभाग जामे मस्जीद छेउमा थियो) भएका दुबैबीच हिमचिम मात्रै भएन, घनिष्टता पनि बढ्यो ।
रिजाल भन्छन्, ‘एकदिन नारायणजीले मलाई गीत लेख्नुस् म गाउँछु भन्नु भयो । म छक्क परेँ । मैले आफूले गीत लेखन छोडिसकेको बताएँ । तर उहाँ मान्नु भएन । उहाँले कैयनका गीत मेरै अगाडि च्यातेको मैले देखेको थिएँ । म त्यो अवस्थामा पुग्न चाहन्नथेँ । सायद त्यसैले पनि होला, मलाई पसिनै आयो । मैले म सक्दिन नै भनेँ ।’
तर, नारायण गोपाल पनि हठि स्वभावका थिए । उनले रिजाललाई गीत लेख्न उक्साई रहे । सूचना विभागमा उनलाई फूर्सदनै हुन्थेन् । केही दिनसम्म त उनले गीत लेखेनन् । एउटा शनिबार भने अफिसकै कोठामा बसेर बीस वर्षपछि दुई वटा गीत केही समयको अन्तरालमा लेखे । र, कोटको खल्तीमा राखे ।
केही दिन पछि उदाए नारायण गोपाल । गीत लिए । हेरे । र केही नभनेर हिँडे । कालीप्रसादलाई लाग्यो, ‘मेरो र नारायणको सम्वन्ध यत्ति नै रहेछ’ । निकै समय नारायण गोपाल र कालीप्रसादको भेट भएन ।
फेरि एक दिन नारायण झुल्किए, सूचना विभागमा । उनले रिजाललाई चिया खुवाउन भने । र एउटा क्यासेट चक्का दिएर सुन्न भने । बेलुकी घर पुगेर कालीप्रसाद रिजालले क्यासेट सुने । त्यसमा उनले लेखेको दुइवटै गीतको रेकर्ड थियो । एउटा ‘आँखा छोपी नरोउ भनि भन्नु पर्या छ’, र अर्को ‘झरेको पात झैं भयो उजाड मेरो जिन्दगी’ ।
कालीप्रसाद भन्छन्, ‘यीनै दुई गीतले मलाई फेरि उचाईमा पु¥यायो । मेरो गीती यात्रा फेरि सुरु भयो । तर यही उचाईंमा पु¥याएको गीतले मलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको अनुभूत पनि गरायो ।’
आँखा छोपी नरोउ भनिको सफलताले सीमा नाघेको थियो । उनको चर्चा सर्वत्र भएको थियो । तर, राजाको चाकडी गर्नेहरुले, राजाभन्दा बढी आफूलाई रोयलिष्ट मान्नेहरुले गीत सत्ताको विरुद्धमा लेखिएको भनेर राजालाई बिन्तीपत्र दिएछन् । राजालाई कालीप्रसादले सरकारी नुन खाएर राजद्रोहको गीत लेख्यो भनेर सुनाएछन् । कालीप्रसादलाई फाँसी दिनुपर्छसम्म पनि भनेका रहेछन् । यो जहर हो, यसले डस्छ पनि भनेर सुनाएछन् ।
पछि राजाले त्यो बिन्तीपत्र तत्कालिन जाँचबुझ समितिमा पठाएछन् । जाँचबुझ समितिले गीत पुरा सुनेर ‘गीतमा फाँसी नै दिनुपर्ने जस्तो खासै कुरा केही नभएको’ जाहेर गरेछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यसै विषयलाई लिएर एकदिन साहित्यकार धुस्वा सायमीले मलाई भने ‘बाजे बाँच्यौ है बाँच्यौ’ । यो गीतले झण्डैझण्डै मृत्युको मुखसम्म पुर्याएको थियो । आज पनि सोच्छु, यदि जाँचबुझका गीत जाँचकी कट्टर परेको भए वा राजा वीरेन्द्र पनि अनुदार परेको भए मेरो के हुन्थ्यो होला ? उनीहरुले त मलाई साहित्यिक सहीद नै बनाउन लागेका रहेछन् ।’
आफ्नो जीवन सधैं ‘कन्ट्रोभर्सी’मा रुमल्लिएको उनी बताउँछन् । यसका लागि उनी आफ्नो कुनै दोष नभएको दावी गर्छन् । सामाजिक सेवा समन्वय परिषदमा निवेदन हालेर जागिर नखाएको उनको भनाई छ । राजारानी सँग निकट रहेर काम गरेपनि आफूमा विद्रोही चेत यथावत रहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘विद्रोही चेत मेरो प्रवृत्ति हो । मेरो विचारमा साहित्यकार जहिले पनि सरकारको विरोधी हुन्छ । बरु राजनीतिक दलहरुबीचमा विरोधी विरोधी मिलेर काम गर्ने वातावरण आउला । तर एउटा लेखक कहिल्यै सरकारको समर्थक हुन सक्दैन । साहित्यमा लाग्ने जोसुकै पनि सत्ताको प्रतिपक्ष हुन्छ ।’
उनले एकपटक सूचना विभागमा कार्यरत रहँदा नै २०३७ सालको गाइजात्रामा व्यङग्य कविता सुनाएका थिए । त्यो कवितालाई लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पुर्जी नै काटेको उनी सुनाउँदै थिए ।